Ogaden News Agency (ONA) – Wararka Hoose ee Jigjiga iyo Maamulka Gabre iyo Cabdi Iley Maxay ka Qoreen …
Wararka Hoose ee Jigjiga iyo Maamulka Gabre iyo Cabdi Iley Maxay ka Qoreen …
MSomalida waxay leeyihiin maahmaaho ay ku dhantahay xikmad iyo tusaalayn oo markaad doonto inaad mawduuc ka hadasho aad ku furfuran karto. Waxaa ka mid ah maahmaahda ah – War La Helaa Talo La Helaa -, taasoy ula jeedaan markaad hesho xogta dhabta ah ayaad taladeeda heli kartaa.
Waxaa jira dhalinyaro aqoon leh oo ku dhex jira maamulka Gabre iyo Cabdi iley ay ka dhoo-dhoobeen Jigjiga oo uga xogwarama dadweynaha xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka Ogadenya iyo sida ay labadaa nin u baabi’yeen shacabka Somaliyeed ee Ogadenya iyo dalkaba. Waxay dhalinyaradan aad xooga u saareen inay soo saaraan sirta u qrasoon labadaa nin ama si cilmiyeysan uga faaloodaan waxay la maagan yihiin umadda.
Waxaa ka mid ah shabakadaha ay wax ku qoraan dhalinyaradaa, marka laga yimaado wararka ay sida tooska ugu soo diraan shabakadaha iyo warbaahinta halganka, shabakadaha ay ka midka yihiin Faallo.com oo in mudda ah soo waday hawshan. Shabakaddan markasta waxaad ugu tagi warar muhiim ah iyo faalooyin iyo maqaalo cilmi ku dhisan. Dabcan, wax dhamaystiran ma jiro, oo qoraa kasta wuxuu qorayo waxaa saamayn ku leh shucuurtiisa iyo wuxuu aaminsan yahay. Haduu yahay nin Itobiya ay la weyntahay oo u arka in mustaqbalkiisa iyo midka umadda Somaliyeedba ay ku xidhantahay Itobiya oo lahoos galo, qoraaladiisa waxaa hogaaminaya dareenkiisa ah inuu daleeceeyo si toos ah ama si dadban, waxkasta oo muujinaya xoriyadda Ogadenya iyo halganka JWXO. Taasoo jirta hadana shabakadda Faallo maqaalo muhiim ah oo xigmad iyo xogba xambaarsan ayaad ka heli sida maqaaladan aan hoosta ka xariiqay. Riix:
– Arimaha ku saabsan Horumarka laga sheego TV-ga gumaysiga ugu talagalay marin-habaabinta shacabka, gaar ahaan qurbajoogta ayay cinwaan uga dhigeen: Hollywood Cabdi Maxaa u Galay : Riix halkan:
– Boobka hantida shacabka ayay waxay ka qoreen maqaal ay cinwaan uga dhigeen; SAWIR: Cabdi Iley, Ina Haybe iyo Hantida Boolida ah. Riix halkan
– Nin ka mid ahaa qurbajoogta oo dalkiisa ku noqday sida ka muuqata qoraalka shabakadda ka dibna ku dambeeyay Jeel Ogadeen ayay cinwaan uga dhigeen; WAA KUMA ENGINEER CABDULQAADIR CABDULLAAHI ( BURAYDA) Riix Halkan:
– Arimaha Somaliya iyo sida Somaali u bahdilantay waxaa ka mid ah cinwaanka ah: Itobiya oo Somlaiya Lagu haysto. Riix halkan:
– Qaar ka mid ah Somalida daggan Denmarka oo wasiirka AD ee Itobiya uu kula dardaarmayo inay khamriga si fiican u cabaan ayay maqaal iyo muuqaal kasoo qoreen; Riix halkan:
Hadaan intaa kaga gudubno shabakadda Faallo oo maqaalo hore aan kasoo xiganay, waxaa hadda soo shaacbaxay shabakad cusub oo la magacbaxday DDSPOST.Com oo iyagana aad moodu inay xog farabadan ka hayaan shirqoolada Cabdi Iley iyo maamulkiisa hoose. Shabakaddan oo la mida joornaalada loo yaqaano (tabloid) oo siraha hoose ee dadka caanka ah raadsada, ayaa waxay aad wax uga qoraan Cabdi Iley iyo dadka ku xeeran. Inkastoo aanan waafaqsanayn habka ay wax u qoraan, oo inta badan ay ku dhisaan qabiil, hadana maqaalo xiisa leh oo sira badan ay ku jirto ayay soo qoreen. waxaana ka mid ah cinwaanka;
– Shirqool ka dhan ah shaqaalaha DDSI oo soo fool leh Sii Akhri
– Yaa Dilay Garaad Xasan Garaad Axmad Garaad Makhtal Dahir. Sii Akhri
– Isgarab dhigida dhibaatooyinka shacabka wakhtigan Cabdi iley iyo wakhtiyadii hore. Sii Akhri
Waxaa hubaal ah in dhalinyaradan u badheedhay inay dadweynaha gaadhsiiyaan xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dalkooda iyo shirqoolada ay u maleegayso Itobiya shacabkooda ay mudan yihiin qadarinta shacabka, taariikhdana ay xusi doonto. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo shirqoolada cadawga, isla marahaanatana waafajyo wixii waxtar u leh umadda halganka ugu jirta hanashada Xoriyadooda.